Waa sidee Xaaladda Muqdisho? | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidanka dowladda ayaa lagu soo daadiyay wadooyinka muhiimka ah, iyadoo xoogaga taabacsan Mucaaradka ay wali joogaan goobihii hore.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xaaladda Muqdisho ayaa wali cago badan ku taagnayn, waxaaana la filan karaa inuu dagaal qarxo saacad waliba maadaama ay Ciidanka dowladda iyo kuwa Mucaaradka isku hor-fadhiyaan nawaaxiga Madaxtooyadda.
Laga soo billaabo Siigaale illaa Miranaayo iyo Fagax, oo Hodon, C/casiis iyo Kaaraan ka kala tirsan waxaa fadhiya oo difaacyo ka qotay xoogaga Mucaaradka, iyadoo kuwa dowladda ay ku sugan yihiin meel isku muuqata oo aan kala fogeyn.
Waxaa isha lagu wada hayaa wadahadallada socda ee uu Rooble ku doonayo in xaaladda lagu dejiyo, kuwaasoo hadii ay fashil kusoo dhamaadaan, islamarkaana Farmaajo diido inuu muddo-korarsga ka laabto uu dhici kara dagaal.
Dadkii shacabka ahaa ee ka qaxay Hodon iyo Howlwadaag wali ma aysan soo noqon, waxayna ka war sugayaan xaalada sida ay isku bedesho, maadaama ay jiraan dedaallo socda oo lagu raadinayo in wadahadalladii arrimaha doorashadda dib loo billaabo.
Dadka waa dareen ku joog marwalba ka cabsi qaba dagaal ka qarxa Muqdisho, waxaana wadooyinka qaar lagu jaray Ciid ay difaac ka dhiganayaan Mucaaradka, oo isku aruursaday Siigaale, Shiirkole oo ay ku sugan yihiin C/raxmaan Cabdishakuur, Khayre, Jacfar iyo Saadaq Joon.
Waxaa dhinaca Miriyaano ku sugan xoogaga taabacsan Xasan Sheekh, halka Kaaraan uu abaabul ka wado Sheekh Shariif, waana qorsho isku xiran oo la doonayo in lagula wareego Madaxtooyadda, hadii uu Farmaajo ku adkaysto qorshihiisa muddo-korarsiga.